XOG: Maxaa ka ogtahay Daamujadiid iyo boobka dhulalka Qaran? – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd November 2016 22nd November 2016 095
Marka aad maqasho magaca Daamujadiid, waxaa durbadiiba ku hor’imaanaya dulmiga ay dalka ka galeen kooxda magacaasi leh ee xukunka dalka heysta, waxaana shaki kaa galayaa muwaadinimada hoggaanka kooxdaasi.
Kooxda Daamujadiid waxay xukunka dalka kala wareegeen mudane Shiikh Shariif Shiikh Ahmed, oo ahaa madaxweyne ku yimid dhismaha dowladii Jabuuti, ee la xiriirtay in wax loo qeybiyo mucaaradkii Casmara iyo muxaafidkii Baydhabo fadhiyey. Waxaana ay dalka gaarsiiyeen nidaam la isugu dhex dooran karo dalka.
Maxaase dhacay kadib markii la doortay Xasan Shiikh iyo xertiisa?
Waxaa ay howl ka bilaabeen boobka meelaha dihan ee dalka muhiimka u ah, waxaana ay xirteen ilaha dhaqaale ee dalka. Sidoo kale, waxaa ay banaanka dhigeen aqoonyahankii iyo dhallinyaradii dalkan u kacday ee hortood dowladnimada ka shaqeynayey, maxaa yeelay howlgalka boobka ah ee ay rabaan inay fuliyaan lama jaanqaadi karin labadaasi koox ee kale.
Dhulalka dowlada ee ku yaala Muqdisho ayaa waxaa loo sameeyey koox u gaar ah iibintooda si aan sharci aheyn, kuwaasi oo hoos taga kooxda Daamujadiid. Waxaan ay meesha ka saareen inay dhulalkaasi yihiin hanti qaran oo dadka ka dhaceysa.
Tusaale: xeradii Asluubta ee Muqdisho, waxaa lagu bilaabay iib ku dhisan boob qaran sanadkii 2015, waxaana loo gaday Madaxweynaha Galmudug Abdikariim Guuleed, kaasi oo dhaqaalihii kasoo baxay dhulkaasi ku bixiyey ololihiisa doorashada. Waxaana ay taasi aheyd boob loo wada jeedo oo quusiyey shacabka.
“Xerada asluubta waxaa boobay kooxda Daamujadiid, waxaana ay ku galeen taariikh madoow oo aan waligeed ka hareyn. Haddana waxaaba xerada loo biyey Galmudug, maadaama lacagta lagu iibsaday loo isticmaalay ololaha doorashadii Abdikariim ee maamulkaasi, dadka Muqdisho oo dhanna waa yaqaan taariikhdaasi gurracan” ayuu yiri Odey Maxamed Jama Geeddi oo ka mid ah dadka deriska la ah xerada Asluubta.
Dhinaca kale, waxaa ay iib ugu dhaqaaqeen dhulalka dowlada laheyd ee ku yaalay agagaarka garoonka Muqdisho, iyagoo dad masaakiin ah uga raray halkaasi qaab ay ku sheegeen “DAN GUUD”, balse markii danbe isku badeshay “DAN DAAMUJADIID”, maxaa yeelay shirkado iyo shaqsiyaad ay dhaqaale ka qaateen ayey dhulalkaasi ku wareejiyeen.
Dhul kale oo ka danbeeyey dugsi sare Banaadir, oo ay isagana dagenaayeen barakacayaal Soomaaliyeed, oo deegaanadooda ay ka socdaan dagaalo sokeeye iyo kuwa argagixiso, ayaa isagana dadkii degenaa dushooda lagu kala iibsaday, waxaana ay kooxda Daamujadiid ka iibsatay labada dhaqtar ee kala ah Dr, Dufle I yo Dr, Abdirsaq Dalmar, inkastoo ay guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Xaawo Maxamuud Ali “Xaawo-kiin” ay diideen arrintaasi, haddana si shaqadaasi loo fuliyo xilkii gudduumiyenimo waa laga wareejiyey Xaawo-kiin.
Marka laga soo tego dhulalka dowladeed oo ay kooxda Daamujadiid xooga ku iibsatay, ayaa waxaa jira kuwa shaqsiyaad oo handadaad dowladeed iyo dhaqaale bixin kula wareegeen meelo badan oo ka mid ah Muqdisho.
Waxaana Muqdisho hal-heys ka noqotay marka aad shaqsi u sheegto guri aad soo iibsatay in lagu dhaho “MA DHULKII DAAMUJADIID XOOGTAY AYAA LAGA SOO IIBIYEY MISE DHUL XALAAL AH !!?”, tanni waa calaamad muujineysa heerka uu gaaray dhul boobka kooxdaasi iyo sida ay shacabka isag ilaalinayaan boolida iyo xaaraanta ay wadaan kooxda Daamujadiid.
Madaxda ugu badan ee dhaqaalaha dhulalkaasi jeebkooda uu ku dhacay waxaa ka mid ah :
Madaxweyne Xasan Shiikh
Madaxweyne Galmudug Abdikariim Guuleed
Xildhibaan Farah Abdiqadir
Gen, Abdirahman Tuuryare “Taliyihii hore ee nabadsugida”
Ali Shiikh Maxamuud “Madaxweynaha walaalkiis”
Xuseen Shiikh Maxamuud “Madaxweynaha walaalkiis”
Sahro Indha-yar “Xaaska Madaxweynaha”
Qamar “Xaaska madaxweynaha”
Sadaq Abdkariim “Xildhibaan”
Warbixintan waxaa ay qeyb ka tahay xogta taxanaha ah ee ku aadan soo bandhigista boobkii 4 sano ee xukunka daamujadiid, ee uu ugu ugu horeeyo Xasan Shiikh Maxamuud. Waxaana horey idin la wadaagnay boobka ay kala sameeyeen, Xasan Shiikh, Sadaq Abdkarii, labada Xaas ee Madaxweynaha Qamar iyo Sahro, laba nin oo Madaxweynaha la dhashay ee kala ah Ali Shiikh iyo Xuseen Shiikh. Waxaana soo socda warbixino intaasi kasii ballaaran, kuwaasi oo shacabka tusi doona wixii ka daahsoonaa tan iyo 2012.
Ballanteenu waa in aragtidaada noqotaa mid toggan, oo fahmi karta dhegerta taban, oo ay wadaan kooxda DAAMUJADIID.
Dhageyso: Qarax lala eegtay Ciidamada Dowlada oo ka dhacay Duleedka Magalada Baydhabo
TOP NEWS : BIljamka oo Xukun 20 sano ah ku Riday Masuulkii ugu sareeyay Burcad Badeeda Soomaalida